Press Conference on ASEAN Civil Society Conference/ASEAN People's Forum 2014
By ACSC/APF 2014 Media Committee
Representatives of the media and diplomatic community are cordially invited toabriefing by regional and national organizers of the ASEAN Civil Society Conference/ASEAN Peoples Forum 2014, the biggest regional civil society conference held in recent years.
The conference is the largest of its kind held in the history of Burma/Myanmar and the largest ACSC/APF ever, having attracted over 2,800 registered participants to the event which took place at the Myanmar Convention Center, Yangon during March 21-23.
The conference featured several high-level plenaries including keynote speeches by Myanmar President U Thein Sein (delivered by Minister Aung Min), and National League for Democracy patron U Tin Oo. A total of 36 well-attended workshops were held under the4clusters of peace, development, justice and human rights, and democracy.
When: 1-2pm Monday, 24 March 2014
Speakers: Regional and national representatives of the ACSC/APF 2014 Steering Committee
Where: City Golf Resort hotel, Thirimingalar St 10th Mile, Insein Township (Opposite YCDC Golf Course), Yangon. Hotel phone: 01641763, 01641766
Proceedings will be in Burmese and English languages.
U Nyunt Hlaing, Chair, ACSC/APF Media Committee (Myanmar) +9595058285 / 095058285
Debbie Stothard, ACSC/APF Media Committee (English), Tel +66816861652 / 0816861652
အကြောင်းအရာ - အာဆီယံအရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းညီလာခံ/ အာဆီယံပြည်သူ့ဖိုရမ် ၂၀၁၄ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲသို့ဖိတ်ကြားခြင်း
အာဆီယံအရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းညီလာခံ/ အာဆီယံပြည်သူ့ဖိုရမ် ၂၀၁၄ ကို Myanmar Convention Center (MCC) တွင် အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြီးဖြစ်ပြီး ညီလာခံရလဒ်များ ရှေ့ဆက်လုပ်ငန်းစဉ်များအကြောင်းကို တင်ပြရန် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ရပ် ကျင်းပပြုလုပ်သွား မည်ဖြစ်သောကြောင့် တက်ရောက်ကြပါရန် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
နေ့ရက် - ၂၄ ရက် မတ်လ ၂၀၁၄
အချိန် - မွန်းလွဲ ၁ နာရီမှ - ၂ နာရီထိ
နေရာ - City Gold Resort, သီရိမင်္ဂလာလမ်း၊ ဆယ်မိုင်ကုန်း၊ အင်းစိန်မြို့နယ် (YCDC ဂေါက်ကွင်နား)၊ ရန်ကုန်မြို့
မှတ်ချက်။ ။သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာနှစ်ဘာသာဖြင့် ဘာသာပြန်ဆိုမှု ပြုလုပ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဦးညွှန့်လှိုင် (ဥက္ကဋ္ဌ၊ ACSC/APF 2014 မီဒီယာကော်မတီ) +၉၅ (၀)၉၅၉၅၀၅၈၂၈၅
ကိုဂျိုးဇက် (ACSC/APF 2014 မီဒီယာကော်မတီ) +၉၅ (၀)၉၂၅၀၇၅၂၈၀၄
ဒယ်ဘီစတောက်ဟာ့ (ACSC/APF 2014 မီဒီယာကော်မတီ) +၉၅ (၀)၈၁၆၈၆၁၆၅၂